Mahazo sitraka bebe kokoa amin'ny doka Instagram: Fomba fanao 8 tsara hanarahana | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 21, 2019 Alarobia, Oktobra 14, 2020 Douglas Karr
Mihafana anefa ny fifaninanana eo amin'ny lampihazo, ary ny marika kosa mitady izay hahazoana tombony betsaka amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo Instagram. Ampiasaina ny marika iray handrefesana ny fifampiraharahana, ary ny lanjan'ilay marika dia ny fitiavany bebe kokoa. Hiresaka tetikady izay afaka manatsara ny isan'ny tiany azonao amin'ny doka amin'ny kaonty marika ianao.
Makà bebe kokoa amin'ny doka Instagram
Ny tiany dia manakiana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny Instagram. Mampiseho ny firosoana sy ny fikasana avy amin'ireo mpampiasa izany, midika izany fa mizotra amin'ny lalana marina ianao. Izany dia nilaza fa mety ho sarotra ny mitaona ny olona ho tia ny hafatrao, indrindra raha marika vao manomboka ianao. Nasongadinay ny fomba sasantsasany izay afaka manampy anao hahazo ny isan'ireo tianao indrindra amin'ny marikao.
1. Mizarà sary sy horonan-tsary avo lenta
Ny fomba tsara indrindra ahazoanao antoka ireo tianao amin'ny kaontinao dia rehefa mandefa atiny avo lenta ianao. Tena marina izany amin'ny resaka doka satria ho hitan'ny olona betsaka kokoa noho ny mpanaraka anao fotsiny izy ireo. Ny ankamaroan'ny marika dia miezaka mafy mba hahazoana antoka fa mivadika loha ny doka ataon'izy ireo. Ny fampielezan-kevitra doka vita tsara dia manana vintana maro ho lasa viral, mampikatso ny marika amin'ny fahitana ambony. Ity misy an ohatra ho an'ny doka avo lenta ao amin'ny Instagram
2. Mamorona Caption Tsara
Raha ny tena manintona an'i Instagram dia ny seha-pifanehoana sary mahasarika, ny ampahan-tsary dia segondra farany rehefa miresaka marika mampiseho ny fahaizan'izy ireo. Ny caption tsara dia hita hampitombo ny fanentanana ny marika sy ny fanampiana ny fahatsiarovana ny marika. Ary koa, ny fanazavana dia lafiny iray amin'ny hafatrao izay azonao atao ny miverina mahazo sitraka bebe kokoa raha tsy ampy ny sary. A fanazavana mahaliana afaka mahazo fanehoankevitra ihany koa ny mpanaraka, izay mety hanatsara ny fifamofoana.
3. Ampiasao am-pahendrena ireo CTA sy Hashtags
Ny Hashtags sy ny CTA (antso ho amin'ny hetsika) dia tsara hanentanana ny olona hiditra ao raha toa ka ampiasainao tsara. Hashtags dia ampahany lehibe amin'ny Paikady fampiraisana Instagram. Mba hahazoana ny doka ataonao amin'ny olona akaiky anao dia ampiasao tenifototra eo an-toerana ho an'ny doka Instagram anao. Azonao atao koa jereo ireo tenifototra malaza ao amin'ny akany hanananao mpanaraka bebe kokoa ho an'ny kaontinao.
Ny CTA dia ampiasaina hamitahana ny olona hanatanteraka hetsika hentitra ao amin'ny kaontinao Instagram. Ny CTA dia mifototra amin'ny zava-misy, ary mila mahatakatra ny toerana sy ny fomba hampiasana azy ireo ianao. Hanaiky ny CTA fotsiny ny olona raha misy zavatra sarobidy omenao azy ireo. Paikady tsara ny famoronana fahatsapana fahamehana rehefa mampiasa CTA. Andian-teny toa kitiho izao raha te hahalala bebe kokoa, tsy misy raha tsy amin'ny fotoana voafetra dia ohatra tsara mba hisintomana ny olona.
4. Jereo ny fotoana fandefasana hafatra tsara indrindra
Lafiny iray lehibe amin'ny fisarihana fifamatorana bebe kokoa amin'ny kaontinao ny maka antoka fa mifanaraka amin'ny fotoana anaovan'ny mpanaraka anao ny fotoana anaovanao doka. Tsy misy olona "fotoana mety handefasana" ao amin'ny Instagram - miovaova arakaraka ny karazana orinasa sy ny toerana kendrena izany. Izany dia nilaza fa ny fitsipika ankapobe hisarihana ny mpanjifa dia ny mandefa mandritra ora fiasana mandritra ny andro toy ny sakafo atoandro (11: 00 am to 1: 00 tolakandro) na aorian'ny asa (7: 00 PM 9: 00 am). Izany dia nilaza fa mila mijery ny toerana kendrenao koa ianao. Misy ihany koa ny tsipiriany bebe kokoa momba ny fotoana handefasana amin'ny Instagram avy Hubspot fa azonao atao ny manamarika.
5. Fampiroboroboana ny sehatra
Instagram dia manampy amin'ny famoahana sehatra rehetra, izay mahatonga azy io ho sehatra lehibe hampiroborobo ny orinasanao on. Azonao atao ny mampiasa ny sakafonao Instagram ho loharano vaovao farany amin'ny sehatra hafa toa ny Facebook sy Twitter. Io dia mety miasa aminao indrindra rehefa manao fifaninanana ianao. Tian'ireo olona ny fifaninanana mandresy, ka noho izany ny fahazoana ny teny amin'ny sehatra media sosialy hafa dia afaka manampy anao hihanaka bebe kokoa amin'ny marikao. Ary koa, marika marobe marobe no mampiasa ny URL ao amin'ny bio-dry zareo mba hampifandraisina amin'ny pejin-dry zareo Facebook izay ahafahanao mitarika azy ireo mankany amin'ny URL hafa.
6. Tiako sy hevitra momba ny Niches mifandraika
Fomba iray hafa ahafahanao miteraka fahalianana amin'ireo kaonty mifandraika amin'ny akany iray ihany dia rehefa manokana fotoana ianao hifandraisana amin'izy ireo amin'ny kaontiny. Instagram dia niasa tamin'ny fitsipika tsotra foana - firotsahana an-tsehatra. Ka rehefa mifanerasera amin'ny kaontiny ianao dia mampitombo ny fahafahanao misarika fifamatorana amin'izy ireo koa. Azonao atao ihany koa ny mahazo mpanaraka bebe kokoa liana amin'ny kaontinao avy any, izay midika hoe tianao bebe kokoa ho an'ny kaontinao any aoriana any.
7. Midira amin'ny Pod Engagement Instagram
Ny pod dia hafatra mivantana misy eo amin'ny vondron'olona iray izay mitovy akany ao amin'ny Instagram ary te hampitombo ny mpanaraka azy, ny tiany, na ny fomba fijeriny. Ny fotokevitra fototry ny pod rehetra dia ny hoe isaky ny mpikambana ao amin'ny pod no mandefa atiny vaovao dia antenaina hifanerasera amin'izany ny olona ao amin'ny pod. Manampy amin'ny famoahana ny lohan'ny mpanaraka azy ity lahatsoratra ity. Ny olona dia nampiasa pods hatramin'ny nanovan'ny Instagram fanovana ny algorithm. Ny fampirantiana dia mampiseho araka ny lazan'ny laza fa tsy amin'ny fotoana.
8. Ataovy mahavariana ny doka ataonao
Iray amin'ireo fomba voajanahary indrindra hahazoana sitraka bebe kokoa amin'ny doka-nao ny mifantoka amin'ny kalitaon'ny atiny. Tokony ho azonao antoka fa manana kalitao ampy ho azy ireo ny dokanao, noho izany dia miavaka amin'ny ambiny atiny rehetra izy ireo. Anisan'izany ny fampiasana sary mamorona sy mazava mba hisarika ny sain'ny mpanatrika. Ohatra iray amin'ny fomba fanatanterahana ny marika -
Starbucks dia nanana #FrappuccinoHappyHour fampielezan-kevitra izay lasa nalaza be. Vitan'izy ireo tamin'ny loko mamirapiratra sy ny fampiasana famoronana any ambadika mba hamoronana zavatra tokana izay tian'ny mpanaraka azy ireo.
Famonosana - Ny olon-drehetra dia afaka mahazo sitraka amin'ny Instagram
Ny fifandraisan'ny mpanaraka dia ampahany lehibe amin'ny Instagram tsy misy fisalasalana, ary ny tian'ny Instagram no fomba mahazatra indrindra ampiasain'ny olona hampahafantarana ny marika fa tiany (tsy misy pun!) Ny atiny. Ny marika dia mandany vola be amin'ny doka, ary indraindray tsy afaka mampiditra azy ireo hiasa.
Na dia tsy sarotra aza ny fahazoana doka bebe kokoa amin'ny doka dia mila mifantoka amin'ny lafiny maromaro kokoa ianao hahazoana antoka fa marina izany. Ny zavatra toy ny fotoana fandefasana, ny kalitaon'ny sary ary ny fanazavana dia zavatra tena ilaina hodinihina raha tianao ny hamalian'ny mpanaraka anao. Ireto torohevitra ireto dia tokony hanome anao hevitra momba ny fomba hahazoana tombony betsaka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny doka Instagram. Zarao ny fomba nahafahanao nanamboatra ny paikadinao mba hahitana valiny tsara kokoa.